လုပ်ပွဲလို့ ပြောနေတဲ့သူတွေ ကျွန်တော်နဲ့ ထိုးလို့ရတယ် (အောင်လအန်ဆန်) – Sport – Other Sports – Duwun
လုပ်ပွဲလို့ ပြောနေတဲ့သူတွေ ကျွန်တော်နဲ့ ထိုးလို့ရတယ် (အောင်လအန်ဆန်)
အဆိုပါ ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုကိုတော့ နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့ က YJH ကချင်ဘုရားကျောင်းမှာ ပရိသတ်များနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ပြောကြားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ုKKS 2017-11-06 05:06:05.0, 2017-11-06 05:06:05.0
နိုဝင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့က ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ အလိန်းအန်ဂါလာနီနဲ့ပွဲမှာ လုပ်ပွဲလို့ ပြောတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ၎င်းနဲ့ စိန်ခေါ်ထိုးသတ်နိုင်တယ်လို့ အောင်လအန်ဆန်က ထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
‘‘တကယ်သာ လုပ်ပွဲဆိုရင် ဒီပွဲကို ကျွန်တော်မထိုးပါဘူး။ ကျွန်တော့်မှာ စားစရာ၊ နေစရာ အိမ်ရှိရင် ပြည့်စုံပြီ။ ပိုက်ဆံအများကြီး ချမ်းသာချင်တဲ့စိတ် ကျွန် တော့်မှာမရှိဘူး။ ကျွန်တော်ရတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို မရှိဆင်း
ရဲတဲ့လူ၊ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကို ကူ ညီမယ်။ ဒီပွဲကို လုပ်ပွဲဆိုပြီးပြော တဲ့သူ ကျွန်တော်နဲ့ထိုးလို့ရပါ တယ်။ အားပေးတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်း အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်’’ ဟု အောင်လအန်ဆန်က ပြောကြားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
WLC ရိုးရာလက်ဝှေ့ပွဲစဉ်များတွင် မြန်မာလက်ဝှေ့သမားများအောင်ပွဲခံအနိုင်ရရှိခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အောင်လအန်ဆန်နဲ့ အလိန်းအန်ဂါလာနီတို့ရဲ့ ပွဲမှာ လုပ်ပွဲမဟုတ်ကြောင်းကို ပွဲစီစဉ်သူ ဦးဇေသီဟ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သလို အလိန်းအန်ဂါလာနီရဲ့ အမှားကြောင့်သာ အခုလို ပွဲမြန်မြန်ပြီးခဲ့ရခြင်း ဖြစ်
ဒါပေမယ့်လည်း အဆိုပါပွဲမှာ ပထမအချီ ၄ မိနစ်မှာပင် အောင်လအန်ဆန်အနိုင်ရခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်များအကြားလုပ်ပွဲလို့ပြောလာသူတွေရှိလာပါတယ်။အဆိုပါ လုပ်ပွဲလို့ ပြောသူတွေအနေနဲ့ မိမိနဲ့ စိန်ခေါ်ထိုးနိုင်တယ်လို့ အောင်လအန်
ဆန်က ပြောကြားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
အောင်လအန်ဆန်အနေနဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်းချန်ပီယံအဖြစ် ရုရှားနိုင်ငံသားကို စိန်ခေါ်ထိုးသတ်ရယူထားသူဖြစ်ပြီး အလိန်းအန်ဂါလာနီနဲ့ပွဲမှာ ၀ိတ်တန်းမတူညီပဲ ပထမဆုံး စိန်ခေါ်ထိုးသတ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းဝင် ပြိုင်ပွဲတစ်ရပ်လည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Source-7Day News
နှစ်မကုန်ခင် မြင်တွေ့ရမယ့် မေ၀ယ်သာ နဲ့ ပက်ကွီအိုတို့ရဲ့ မကျေပွဲ
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၆၈)နိုင်ငံကို ပြသမယ့် ကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံရှစ်(WLC)
နားလည်မှုလွဲနေတဲ့ ပိုက်ကျော်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အခြေအနေမှန်
မြန်မာ၊ခမာနဲ့ တရုတ်တို့ အားပြိုင်မယ့် ကမ္ဘာ့လက်ဝှေ့ချန်ပီယံရှစ်(WLC - 6)
MMA လိုက်ဟဲဗီးဝိတ်တန်း ချန်ပီယံအတွက် အောင်လအန်ဆန်နဲ့ ဘရာဇီးနိုင်ငံသား မာချာဒိုတို့ ရင်ဆိုင်ထိုးသတ်မည်
မန္တလာမြေက ၁၀ ကြိမ်မြောက် ရွှေခါးပတ် ချန်ပီယံ လုပွဲကြီး
သူတစ်ပြန်ကိုယ်တစ်ပြန်နဲ့ ပူးတွဲသရေ ကျခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်းမင်းနဲ့ဆိုင်းယော့
လက်ဝှေ့လောကကနေ အနားယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ထွန်းထွန်းမင်း ဘာကြောင့် လက်ဝှေ့ ပြန်ထိုးတာလဲ?
မေ၀ယ်လ်သာနဲ့ တစ်ကျော့ပြန် ထိုးသတ်ဖို့ ဆန္ဒရှိနေတဲ့ ပက်ကွီအို
MMA ပွဲလွဲခဲ့တဲ့ ဖိုးသော် ဘာတွေ ဘယ်လို ပြင်ဆင်နေလဲ?
မစ်ဒယ်ဝိတ်ရွှေခါးပတ်ကိုကာကွယ်သွားသူ(သို့)ကတိအတိုင်း ပရိသတ်တွေကို ကုလားကားပြခဲ့တဲ့အောင်လ
"အောင်လကို အနိုင်ယူဖို့ မြန်မာပြည်ကို ရောက်လာတာပါ"(ကမ်ဟာဆီဂါဝါ)
ကုလားကားကြည့်ရတဲ့အတိုင်း ထိုးသတ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ အောင်လအန်ဆန်
"ကျွန်တော့်ရဲ့ နောက်ဆုံး ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ ဖြစ်လာဖို့ရှိပါတယ်" (ပေါလ်ပေါ့ဂ်ဘာ)